Th चीजहरू जुन तपाईलाई आफ्नो व्यवसायको लागि आईटीको बारेमा थाहा थिएन - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B5B बजार समाचार
अप्रिल 16, 2021 अप्रिल 13, 2021 सियरा पावेल ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार
जब तपाइँ तपाइँको आईटी बजेट सिर्जना गर्नुहुन्छ र तपाइँको व्यवसायको प्राविधिक आवश्यकता र मुद्दाहरु पत्ता लगाउँदछ, प्रक्रियामा तपाइँका कर्मचारीहरुलाई समावेश गर्न पक्का हुनुहोस्।
भिडियो कन्फरेन्स र वेबिनारहरूलाई धन्यवाद, अब विश्वका कतैबाट पनि तपाईंको ग्राहक सम्भावना र समुदाय व्यापक गर्न सम्भव छ।
व्यापार वेबसाइट यसको भर्चुअल स्टोरफ्रन्ट हो।
सूचना प्रविधि एक व्यापार को दैनिक चलाउन मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो तपाईंको कम्पनीको लेनदेन रेकर्ड गर्न उद्यम सफ्टवेयरमा तपाईंको व्यवसायको अनलाइन स्टोर चलाएर हो, आईटीले विभिन्न कम्पनीहरूलाई मूर्त र अमूर्त फाइदाहरू कटौती गर्न मद्दत गरेको छ। त्यसोभए, केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंले बेवास्ता गर्नुभयो जब यो आईटीको प्रयोग गरी तपाईको व्यवसायको लागि आउँछ?
जब एक व्यवसाय चलिरहेको छ, तपाईंले प्रविधि पूर्वाधारको सम्बन्धमा ठोस र सक्रिय योजना बनाउनु पर्छ।
१. आईटी बजेट घुमाउनुहोस्
सीआईओ पत्रिकाका अनुसार साना-मध्यम-मध्यम आकारका कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक बजेटको 6.9% आईटीमा खर्च गर्छन्। यी एसएमईहरू ती हुन् जसमा $ 50 मिलियन भन्दा कम राजस्व छ। ठूला व्यवसायहरू यस भन्दा थोरै बाहिर फोर्क। प्रतिवेदनका अनुसार यी प्रायः एसएमई व्यवसायहरूको खास दिशा हुँदैन जब यो आईटीमा लगानी गर्ने गर्दछ।
जब एक व्यवसाय चलिरहेको छ, तपाईंले प्रविधि पूर्वाधारको सम्बन्धमा ठोस र सक्रिय योजना बनाउनु पर्छ। यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि तपाईं कति आईटीको खर्चमा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको खर्चहरूको समीक्षा गरेर र तपाईं पहिले नै आईटीमा कती लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर ठ्याक्कै सुरु गर्नुहोस्। यी खर्चहरूको निर्धारण पछि, तपाईं एक सूचित बजेट बनाउन अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई त्यसो गर्न मद्दत चाहिएमा, तपाईं एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आईटी परामर्श फर्म तपाइँलाई तपाइँको व्यवसायको टेक मुद्दाहरू र आवश्यकताहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न।
२. तपाईका कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण दिदै
जब तपाइँ तपाइँको आईटी बजेट सिर्जना गर्नुहुन्छ र तपाइँको व्यवसायको प्राविधिक आवश्यकता र मुद्दाहरु पत्ता लगाउँदछ, प्रक्रियामा तपाइँका कर्मचारीहरुलाई समावेश गर्न पक्का हुनुहोस्। न केवल यसले उनीहरूको खरीदलाई सुनिश्चित गर्दछ, तर यसले तपाईंको गहन ज्ञान, अनुभव र तपाईंको व्यवसायको बारेमा विशेषज्ञताबाट लाभ उठाउन पनि मद्दत गर्दछ। प्रमुख आईसीटी लगानीका निर्णयहरू र योजना बनाउँदा तपाईको स्टाफलाई संलग्न गराउन पनि लाभकारी हुन्छ।
साना व्यवसायको बृद्धिलाई प्रभावित गर्ने प्राथमिक कारकहरू मध्ये एक प्रतिस्पर्धा र सम्भावित ग्राहकहरूको साथ नेटवर्कि is हो। यद्यपि तपाईको इलाकामा सबै नेटवर्कि events घटनाहरू सम्मिलित हुन असम्भव छ, तर प्रविधि उद्धारको लागि आयो।
भिडियो कन्फरेन्स र वेबिनारहरूलाई धन्यवाद, अब विश्वका कतैबाट पनि तपाईंको ग्राहक सम्भावना र समुदाय व्यापक गर्न सम्भव छ। यो सबै सम्भव छ आधा भन्दा कम बजेटबाट तपाई घटनामा उपस्थित हुन प्रयोग गर्नुहुनेछ। यसैले, सँधै यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ भर्खरको उद्योग घटनाहरूसँग अप-टु-डेट हुनुहुन्छ र उपस्थित हुनको लागि योजना बनाउनुहोस्।
एक सामाजिक मिडिया रणनीति बनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण कारक हो जुन तपाईंको व्यवसाय सर्कल भित्रको नेटवर्कि inमा मद्दत गर्दछ। सबै प्रमुख प्लेटफार्महरूमा एक सामाजिक मिडिया उपस्थिति स्थापना गर्नुहोस्, तपाईंको क्षेत्र चिह्नित गर्न सुरू गर्नुहोस्, ग्राहकहरूसँग संलग्न हुनुहोस्, र तपाईंको ब्रान्ड प्रबन्ध गर्नुहोस्। तपाइँको ग्राहकहरुलाई सहयोगी र सहयोगी टोनमा अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्य छ किनकि सोशल मिडिया नरम बिक्रीको बारेमा हो।
एक राम्रो CRM प्रणाली तपाइँको ग्राहकहरु संग एक राम्रो र जारी सम्बन्ध कायम राख्न सहायता गर्दछ। T
A. ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन (CRM) प्रणाली सिर्जना गर्नुहोस्
एक राम्रो CRM प्रणाली तपाइँको ग्राहकहरु संग एक राम्रो र जारी सम्बन्ध कायम राख्न सहायता गर्दछ। यस व्यवसाय रणनीतिले यो तथ्यलाई ठूलो बनाउँछ कि यस्तो सम्बन्ध राख्दा लाभदायकता र अत्यधिक वृद्धि हुन्छ। यस प्रणालीको साथ, व्यवसायहरूले उनीहरूका ग्राहकहरूलाई संयुक्त फ्रन्ट देखाउँदछ र थप सिमलेस ग्राहक अनुभव प्रदान गर्दछ। तिनीहरू आफ्नो ग्राहक जानकारी प्रभावी ढंगले संगठित गर्दछन् तिनीहरूलाई अधिक व्यक्तिगत अनुभव दिनको लागि र सम्भावनाहरूको साथ कुशलतापूर्वक अनुसरण गर्न।
CRM प्रणाली को उदाहरण
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, राम्रो CRM प्रणाली आकारको बावजुद तपाईंको उद्यमको विकासको लागि आधारभूत हुन्छ। त्यहाँ CRM प्रणाली को विभिन्न प्रकार छन्। तिनीहरू समावेश:
तपाइँको ग्राहकहरु संग संचार गर्न धेरै च्यानलहरु।
प्रत्यक्ष सहायता उपकरणहरू प्रयोग गर्दै।
स्वचालित ग्राहक समर्थन समाधानहरू।
लगातार मार्केटिंग संलग्नता।
ग्राहक सेवाको लागि सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दै।
धेरै अरूमा एक मजबूत ब्रान्ड छवि विकास गर्नुहोस्।
Your. तपाइँको वेबसाइट अप्टिमाइज गर्नुहोस्
व्यापार वेबसाइट यसको भर्चुअल स्टोरफ्रन्ट हो। यसको अप्टिमाइजेसनले लामो अवधिको ब्यापार लक्ष्यहरू ड्राईभ गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ किनकि यसले सफा ईन्टरफेस र उत्कृष्ट रूपान्तरण दर समावेश गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको व्यवसाय वेबसाइट नेविगेट गर्न सजिलो छ जब जानकारीको खोजीमा छ र पाठ भारी छैन। यस्तै प्रकार, तपाईंको कललाई कार्य बटनमा राख्नुहोस् र सम्पर्क विवरणहरू साइटमा मुख्य रूपमा सुविधाको लागि। तपाइँको लक्षित श्रोतालाई सजिलै पुग्न मद्दत गर्न तपाइँको साइटमा केहि शीर्ष-र्या ranking्ग Google पृष्ठहरू समावेश गर्न यो उपयोगी छ।
आईटी को लागी धन्यवाद, धेरै व्यवसाय संग राम्रो ग्राहक समर्थन अभ्यास, उत्पादकता र प्रदर्शन वृद्धि, र अधिक बचत छ। त्यहाँ त्यस्ता उद्यमहरूको लेनदेन र जानकारी सुरक्षित गर्न राम्रो साइबर सुरक्षा उपायहरू पनि लागू गरिएका छन्। तपाईको इन्टर्प्राइजको आकार भए पनि, टेक्नोलोजीमा लगानी गर्नु व्यवसायका मालिकहरूका लागि प्राथमिकता हुनुपर्दछ। माथि उल्लेखित पोइन्टर्सको अतिरिक्त, त्यहाँ अधिक तरिकाहरू छन् जुन IT तपाईंको व्यवसायको लागि एक खेल परिवर्तनकर्ता हुन सक्छ।
व्यापार सांप्रदायिक समाचार IT
सियरा पावेल ओक्लाहोमा विश्वविद्यालयबाट मास कम्युनिकेसनमा मेजर र लिखितमा नाबालिगको साथ स्नातक गरे। जब उनी लेखिरहेकी छैनन्, उनी खाना पकाउन, सिलाउन र आफ्ना कुकुरहरूसँग पैदल यात्रा गर्न मन पराउँछिन्।